Fanjakan�ny maizina !
Lavitry ny kitay ny afo amin�ny hisian�ny mangarahara eto amin�ny firenena ato ho ato. Maizina amin�ny vahoaka ny zava-drehetra, ka tsy atao mahagaga raha �fanjakan�ny maizina� no hiantsoan�ny besinimaro ny fanjakana ankehitriny.
Tsy resahina intsony ny tany aloha fa ny frankofonia indray izao no maresaka, ary miha mazava tsikelikely ny ambadika maloto sy ny fitiavan-tenan’ny mpitondra, izay toa manao sarimihetsika sy mihevitra ny vahoaka ho bado. Resahina foana fa tombontsoam-pirenena no tandrovina ao anatin’io fihaonana io. Ekena tokoa fa voninahitra ho an’ny tanindrazantsika izany. Tsy azo lavina fa misy ihany ny Malagasy mahazo tombontsoa na dia iviny kely aza fa ny ankamaroany dia mijanona ho mpitazana sy tsy mahalala izay ambonin’ny tany. Mipoitra tsikelikely ny marina satria kolikoly, kitranoantrano, hosoka no betsaka fa tsy misy fangaraharana. Olom-bitsy ao anatin’ny fitondrana no migoka ny tombontsoa isan-karazany. Ny 62% tamin’ny tolo-barotra izay manodidina ny 26 miliara no ahiana ho nisy kolikoly, ny 54 tamin’ireo 107 tamin’ireo asa fanamboarana fotodrafitrasa no voalaza fa tsy nisy tolo-barotra ara-dalàna fa nofihinin’ny mpitondra ho azy ireo samirery. Ny avo ihany no tovanana fa ny maro an’isa dia haetry hatrany. Malaza indray izao fa nahazo 65 miliara dolara avy amin’ny banky iraisam-pirenena i Madagasikara. Mba hisy akony ara-tsosialy ve izany ? Sao dia efa fotoana hifohazana izao ? Sa kosa hanaiky ho jamba sy pahana lava ao anatin’ny fanjakan’ny maizina eto foana isika e ?